Varavarana misokatra ho an’ny fananan-tany
Famaranana ny atrik'asa teto Toamasina
Ny minisim-panjakana misahana ny tetik'asa ny filoham-pirenena Atoa RAFIDIMANANA Narson no nitarika izany, ny zoma faha 29 ny volana jolay 2016 lasa teo tamin'ny efitrano malalaka ny faritra Atsinanana no nanaovana ny famaranana raha tao ami'ny kaominina andrenivohitry ny Toamasina no nanaovana ny fanokafana izany tamin’ny alakamisy 28 jolay. Nivotra tao anatiny izany ny fampahafantarana ireo dingana atao amin'ny fikarakarana ny taratasy ahazahoana ny tany ho any olona tehahazo izany. Nahaliana ny olona tokoa izany ka maro ireo nitondra ny fitarainany sy nangataka fanazavana misimisy kokoa, izay nifandrimbonany ireo tompon'andraikitra teo anivon’ny fananan- tany ny famaliana ny fanontaniana niantefa tamin'izy ireo.
Araka ny resaka nifanaovana tamin'ny minisitra Atoa RAFIDIMANANA Narson dia ny teto Toamasina no nanombohana ny atrik'asa iarahana amin'ny vaohaka izany ka ezahana atao manerana ny nosy.
Nisy ihany koa ny fanakianana natao ny olona fa ny fanjakana mihitsy no mamarotra tany amin'ny mpambola sy ny vazaha, nitondra ny nanazava mahakasika izany Atoa RAFIDIMANANA Narson, minisim-panjakana misahana ny tetika’asa ny filoham-pirenena, ary nanamafy fa tsy nanao izany ny fitondram-panjakana. Irinra ny fahombiazana amin’ny artik'asa mihainga ifotony ary mbola hotohizana izany mba ahafantaran’ny malagasy ny tokony ataony ahazahoany mikarakara amin’ny ny tany hipetrahany tsy ho vaoelingeline mba tsy ho tompony mangataka ny atiny intsony Malagasy, hoy hatrany Atoa minisitra.
(127) VAVIROA Marcelline : 30-07-2016 - 10:33